आवास कानून | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: आवास कानून
के पानी निपटान पानी निपटान छ?
के फोहोर पानी निकासी एक पानी आपूर्ति छ? खानेपानी र ढल निकास पनि कम छन्। भुक्तान।एम।bतपाईंको सम्झौताको सामग्रीबाट यो शाब्दिक रूपमा लिन्छ कि पानी आपूर्ति (तातो र चिसो पानी) रोजगारदाता द्वारा भुक्तान गरिन्छ, र यस्तै। सेवाहरू ...
अपार्टमेन्ट बेच्दा तपाईलाई चेक आउट गर्न आवश्यक छ?
मैले अपार्टमेन्ट बेच्दा कहिले जाँच गर्नु पर्छ? जैसा कि तपाईं खरीददारसँग सहमत हुनुहुन्छ, तपाईंले जाँच गर्न आवश्यक छ। कागजातहरूको वितरणको बेला कोही सन्तुष्ट हुनेछ, कोही पछि। उदाहरण को लागी, हामीले पैसालाई packages प्याकेजमा विभाजित गर्‍यौं ...
मेरो पास एसजीवी- 15 2007G कुनै पासपोर्ट छैन, हरायो। र अपराधी कोड काउन्टमा प्रमाणिकरण अन्तराल प्रदान गर्न आवश्यक छ
मसँग काउन्टर SGV-15 2007 कुनै पासपोर्ट छैन, हराएको छ। र क्रिमिनल कोडले मिटरमा क्यालिब्रेसन मध्यान्तर प्रदान गर्न माग गर्‍यो फौजदारी कोडमा बयान लेख्नुहोस् र राहदानी हराएको छ भनेर संकेत गर्नुहोस्, म तपाईंलाई आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन भन्दछु ...
अपार्टमेन्ट भवनमा मेलबक्सलाई कसले मरम्मत गर्नुपर्छ?
अपार्टमेन्ट भवनमा मेलबक्सहरू कसले मर्मत गर्नुपर्छ? अभ्यासले देखाउँदछ कि विकल्पहरू सम्भव छ। वास्तवमा, मेलबक्सहरू निवासीहरूको सम्पत्ति हुन्। तर "रूसको पोष्ट" संग सहि कार्यले तपाईंलाई नयाँ मेलबक्सहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ ...
Notarized प्रमाणपत्र जुन अचल सम्पत्तिको खरिदको खरिद र खरीद
Notarized प्रमाणपत्र कि HOLOST रियल ईस्टेटको खरीद र बिक्री यो प्रमाणपत्र होइन, तर तपाइँ विवाहित नभएको दर्ता अधिकारीलाई एक notarized कथन हो। मुद्दा मूल्य १०० हो ...
अपार्टमेन्टको बिक्रीको समर्थनमा एक वकीलको सेवा कति हो?
एक अपार्टमेन्ट खरीद र बिक्री लेनदेन समर्थन गर्न एक वकील कसरी खर्च गर्छ? म एक घर जग्गा एजेन्सी फ्लोर सिफारिस गर्न सक्छु। मैले उनीहरू मार्फत अपार्टमेन्ट किनें, सबै ठीक छ जस्तो देखिन्छ, it's बर्ष भइसक्यो। )) हो, सिद्धान्तमा ...
गैर-भुक्तानीको लागि विच्छेदन पछि विद्युत् जडान कसरी गर्ने?
कसरी भुक्तानी को लागि विच्छेदन पछि बिजुली नै कनेक्ट गर्न? प्रश्न यो छ, के विच्छेदन प्रक्रिया उपभोग गरिएको बिजुलीको लागि भुक्तान नगरेकोमा अनुसरण गरिएको छ? उपभोक्ताले उपभोग गरिएको बिजुलीको भुक्तानी नगरेको खण्डमा आंशिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ...
सिल्कको नमूना अनुप्रयोग
नि: शुल्क फारममा आवास कार्यालयमा नमूना आवेदन म तपाईंलाई कुनै पनि नमूनामा सल्लाह दिन सक्दिन किनभने म टेम्पलेटहरूसँग काम गर्दिन। तर म तपाईंलाई सल्लाह दिन सक्छु सामूहिक गुनासो नलेख्न। सबैले लेख्नु पर्छ ...
र कहाँ सामाजिक भाडा अनुबंध प्राप्त गर्ने
र कहाँ एक सामाजिक रोजगार सम्झौता जारी गर्न र निष्कर्ष। यदि छैन भने। तर तपाइँ नगरपालिकाको अपार्टमेन्टमा सामाजिक भाँडा सर्तमा बस्नुहुन्छ। पूर्णमा जानुहोस्। शरीर कार्यान्वयन हुनेछ। आवासको ठाउँमा अधिकारीहरू ...
आवास र एक अपार्टमेटको बीचमा के फरक छ?
आवास र अपार्टमेन्टको स्थिति बीच के भिन्नता छ? कुनै प्रकारको मौखिक पखाला। "बस्ने क्वार्टर" को अवधारणा "अपार्टमेन्ट" को अवधारणा भन्दा धेरै फराकिलो छ, किनकि यसको मतलब छुट्टै घर र कोठा दुबै ...
Dacha सहकारीमा सार्वजनिक भूमिको निजीकरण!
Dacha सहकारीमा साधारण जग्गाको निजीकरण! साधारण जमिन वा जमिन बगैचा सम्बन्धी संघहरूमा साझा सडकहरू हुन् जसका साथ मालीहरू उनीहरूको बगैंचामा ड्राइभ गर्छन् ...
के आमाबाबु अन्य ठाउँमा दर्ता भएको छ भने यो दादीलाई बच्चा दर्ता गर्न सम्भव छ?
के हजुरआमाको साथ बच्चा दर्ता गर्न सम्भव छ यदि आमाबुबा कतै दर्ता भएका छन्? १० बर्षको उमेरमा नपुगेको बच्चाको बसोबास गर्ने स्थान भनेको उसको आमा बुबा वा आमा वा बुबाको निवास स्थान हो ...
ओडीपीयूको भुक्तानी रूसी संघको क्षेत्रीय विकास मन्त्रालयले १.13.03.2012.०5243.२०१.14 को by२6--एपी / १ of लाई निम्न रिपोर्ट गरेको छ। मे 2011, २०११ मा, रूसी संघ सरकारको 354 XNUMX डिक्री द्वारा नियमहरुमा संशोधनका लागि अनुमोदन गरियो।
अपार्टमेंट-ग्रिडोर, लगगिया, प्यान्ट्रीको गरम क्षेत्रमा के समावेश छ?
अपार्टमेन्ट-कोरिडोर, लगगिया, भण्डारण कोठाको तातो क्षेत्रमा के समावेश छ? निश्चित गर्न कोरीडोर, लगगिया - होईन। प्यान्ट्री, यदि भित्र छ भने, पनि समावेश छ। कोरिडोर र भण्डारण कोठा बैठक क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन, र तताउने अनुसार भुक्तान गरिन्छ ...
अपार्टमेंट भवन अन्तर्गत भूमिको निजीकरणको अर्थ के हो?
अपार्टमेन्ट भवनको लागि जग्गा निजीकरण गर्ने कुरा के हो? UNDER मात्र होइन, तर घरको नजिक पनि ... निजीकृत क्षेत्रको मामलामा मालिकहरूसँग अनुमति न मागेको आफ्नै विवेकमा यसलाई प्रयोग गर्ने अधिकार छ ...
नगरपालिकाको अपार्टमेन्टको विनिमय
एक नगरपालिका अपार्टमेन्टको आदानप्रदान कोठाको साथ विकल्पको एक जोडी खोज्न कोसिस गर्नुहोस्। ताकि फुटेज मेल खान्छ र एक छिमेकी एउटा सांप्रदायिक अपार्टमेन्टमा बस्दछन्। र यो कुन क्षेत्र होईन, मुख्य कुरा भनेको सांप्रदायिक अपार्टमेन्ट अवस्थित छ ...
सामाजिक भाँडामा अपार्टमेन्टमा बस्नु भनेको के हो?
सामाजिक भाँडामा अपार्टमेन्टमा बस्नु भनेको के हो? राज्य कोठा निजीकृत गरिएको छैन, त्यसैले परिवार सामाजिक भाँडामा बसिरहेको छ कोठा भाडामा लिने अधिकार छैन, अर्को कोठा पूर्व-खाली गर्ने अधिकार छैन ...
ठोस कचरा के हो?
MSW के हो ??? propertyырарваорврррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс शुल्क MSW साझा सम्पत्तीको मर्मतको अंश। तपाईंको ठेकेदार कला अन्तर्गत जरिवाना छ। १osp..14.7 रोस्पोटरेब्नाडजोरबाट रूसी संघको प्रशासनिक कोडको। जैविक फोहोरको घर्षण। तपाईलाई ठोस घरेलु फोहोर चाहिन्छ ...
कृपया मलाई भन्नुहोस्, उपयोगिताका लागि भुक्तानी सर्तहरू?
के तपाई मलाई उपयोगिताहरु को लागी भुक्तान सर्तहरु बताउन सक्नुहुन्छ? सम्झौताको बमोजिम। प्रत्येक महिनाको दशौं दिन सम्म। तपाईंको रसीदहरू ढिला आइपुग्छ, त्यसैले तिनीहरूसँग काउन्टरमा भरोसा गर्न समय छैन। तपाईं यसको बारेमा हुनुहुन्छ ...
कसरी अपार्टमेंटको खरीदको 13% र कुन कागजातहरू आवश्यक पर्दछ?
कसरी अपार्टमेन्टको खरीदको १%% प्राप्त गर्ने र कुन कागजातहरू आवश्यक छन्? आम्दानीको प्रमाणपत्र २ व्यक्तिगत आयकर, खरीद र बिक्री सम्झौता, स्वामित्वको प्रमाणपत्र, आवश्यक, तपाईंबाट पैसा फिर्तामा विक्रेताको रसिद ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 10 अर्को पाना
98 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,851 प्रश्नहरू।